धरान। भोलि देशव्यापि रुपमा गुरु पुर्णिमा मनाईन्दैछ । भोलिको दिन आफुलाई मार्गदर्शन गराउने आफनो गुरुपति सद्भाव साथ शुभकामना आदन प्रदान गरिन्छ । त्यसैगरी धरान ९ सिद्धीविनायक पदमा सन्चालित युनाईटेड डान्स एकेडेमीले गुरु पुर्णिमाको अवसरमा शुभकामना आदन प्रदान तथा एकदिने युनाईटेड डान्स स्टार प्रतियोगिता आयोजना गर्नेभएको छ । त्यसै सन्दर्भमा रहेर डान्स एकेडेमीका सन्चालक सन्तोष तामाङ सँग सन्देश तिमल्सिनाले कार्यक्रम र कार्यक्रमको उदेश्य बारे गरेको छोटो कुराकानी ।
भोलिको तयारि के कस्तो हुँदै छ ?
भोलि गुरु पुर्णिमा हो । त्यसैको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा रहनु भएको गुरुहरुलाई हामी सबैले स्वागत तथा शुभकाना आदन प्रदान गर्ने र युनाइटेड डान्स स्टार कार्यक्रम राखेका छौ । अहिले त्यसैको तयारी भइरहेको छ । कार्यक्रममा ९ नं. वडाको वडाध्यक्ष रत्न कटुवाल प्रमुख अतिथि रहनेछ ।
कोरानाको माहामारिमा पनि कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुदै छ ?
हामिले सामाजिक दुरी कायम गरेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौ । कार्यक्रम हलमा अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिनेछौ । सुरक्षिा र सावधानि अपनाएरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छा हौ
भोलिको कार्यक्रम चाहि विशेष के हो ?
मैले अघि पनि भनिसकेको छु । भोलिको विशेष कार्यक्रम भनेका गुरु पुर्णिमाको अवसरमा सबै गुरुहरुलाई गुरु पुर्णिमाको शुभकामना दिने तथा डान्स एकेडेमीका भाईवहिनिको प्रतिभालाई स्टेज दिने हिसाबले एकदिने नृत्य प्रतियोगिता समेत आयोजना गरेका छौ । जसमा डान्स एकेडेमी भित्रका भाईवहिनिहरुले आफनो नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन ।
प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी के छ ?
प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद तिन हजार सहित सम्मान पत्र समेत प्रदान गरिनेछ । जसले उनिहरुको पतिभालाई थप उजागर बनाएर लैजाने हामिले आशा गरेका छौ । यो पुरस्कार प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गरिनेछ ।
यसबाहेक अन्य अरु कार्यक्रम पनि छ की ?
कार्यक्रमको अर्को उदेश्य भनेको अहिले विश्वव्यापि रुपमा कोरोना भाईरसको महामारी छ । हो यसलाई समेत मध्यनजर गर्दे हामिले कोरोना भाईरस सम्बन्धि सचेतना मुलक कार्यक्रमलाई समेत अगाडी बढाएका छौ । हामीले हाम्रो कार्यक्रममा यो भाईरस सम्बन्धि जानकारी गराई सतर्क रहन समेत आव्हान गर्ने र आम जनसमुदायमा यो सम्बन्धि शन्देश पुर्याउने उदेश्य रहेको छ ।
विशेष गरि अन्त्यमा तपाइलाइ धन्यवाद । किनभने मलाइ यो अवसर दिनु भयो र धरान नगरबासि,पत्रकार तथा कलाप्रेमी लाई भोलिको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु । कलाकारहरु फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र हाम्रो भाग्य भविष्य निर्धारण गर्न सक्छौ । त्यसैले अन्त्यमा सबै कलाकार जुटेर काम गर्न समेत म अनुरोध गर्दछु ।